အီဘရာဟီမိုဗစ် Ibrahimović ကို အိုးထရက်ဖို့ဒ်မြေမှာ ပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မလား
13 Oct 2018 . 4:04 PM
LA Galaxy အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့ အသက်(၃၇)နှစ်အရွယ် ၀ါရင့်တိုက်စစ်မှုး အီဘရာဟီမိုဗစ် Ibrahimović ကို မန်ယူအသင်းနည်းပြ မော်ရင်ဟို Mourinho ကလာမယ့် ဇန်န၀ါရီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ ပြန်လည်ခေါ်ယူလိုနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ LA Galaxy အသင်းအတွက် (၂၅)ပွဲကစားထားပြီး (၂၁)ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။
မော်ရင်ဟိုနဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ် တို့ဟာ အင်တာမီလန်နဲ့ မန်ယူအသင်းတွေမှာ လက်တွဲညီခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ မန်ယူအသင်းမှာ ကစားတုန်းက ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီး အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံသွင်းဂိုး(၂၉)ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို ဆုဖလားအောင်မြင်မှုတွေလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မေဂျာလိဂ်ကနေ ဒိုနိုဗန် Donovan နဲ့ အွန်နရီ Henry တို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကာလတိုနဲ့ လာရောက်ကစားခဲ့ကြဖူးတာကြောင့် အီဘရာဟီမိုဗစ် အနေနဲ့လည်း အသင်းဟောင်းမန်ယူအသင်း အခက်အခဲကြုံနေချိန်မှာ လာရောက်ကစားပြီး အကူအညီပေးသွားမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ အသက်ကြီးလေ ပိုကောင်းလေဖြစ်ပြီး နတ်ဘုရားကြီးလို့ တင်စားကြတဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ် ကိုအိုးထရက်ဖို့ဒ်မြေမှာ ပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မလား ဆိုတာကတော့ …
အီဘရာဟီမိုဗစ် Ibrahimović ရဲ့ မန်ယူကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှုများ
Photo: Yahoo! Sports , SPORTbible , US Sports Guru
အီဘရာဟီမိုဗဈ Ibrahimović ကို အိုးထရကျဖို့ဒျမွမှော ပွနျလညျမွငျတှရေ့တော့မလား
LA Galaxy အသငျးမှာ ခွစှေမျးပွကစားနတေဲ့ အသကျ(၃၇)နှဈအရှယျ ဝါရငျ့တိုကျစဈမှုး အီဘရာဟီမိုဗဈ Ibrahimović ကို မနျယူအသငျးနညျးပွ မျောရငျဟို Mourinho ကလာမယျ့ ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှကေ့ာလမှာ ပွနျလညျချေါယူလိုနတေယျလို့ သတငျးတှထှေကျပျေါနပေါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ အီဘရာဟီမိုဗဈဟာ LA Galaxy အသငျးအတှကျ (၂၅)ပှဲကစားထားပွီး (၂၁)ဂိုးသှငျးယူထားပါတယျ။
မျောရငျဟိုနဲ့ အီဘရာဟီမိုဗဈ တို့ဟာ အငျတာမီလနျနဲ့ မနျယူအသငျးတှမှော လကျတှဲညီခဲ့ကွသူတှဖွေဈပွီး ဆကျဆံရေးကောငျးတှကေိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားကွသူတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ အီဘရာဟီမိုဗဈဟာ မနျယူအသငျးမှာ ကစားတုနျးက ခွစှေမျးပွကစားနိုငျခဲ့ပွီး အသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံသှငျးဂိုး(၂၉)ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့သလို ဆုဖလားအောငျမွငျမှုတှလေညျး ရရှိခဲ့ပါတယျ။ မဂြောလိဂျကနေ ဒိုနိုဗနျ Donovan နဲ့ အှနျနရီ Henry တို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ကာလတိုနဲ့ လာရောကျကစားခဲ့ကွဖူးတာကွောငျ့ အီဘရာဟီမိုဗဈ အနနေဲ့လညျး အသငျးဟောငျးမနျယူအသငျး အခကျအခဲကွုံနခြေိနျမှာ လာရောကျကစားပွီး အကူအညီပေးသှားမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။ အသကျကွီးလေ ပိုကောငျးလဖွေဈပွီး နတျဘုရားကွီးလို့ တငျစားကွတဲ့ အီဘရာဟီမိုဗဈ ကိုအိုးထရကျဖို့ဒျမွမှော ပွနျလညျမွငျတှရေ့တော့မလား ဆိုတာကတော့ …
အီဘရာဟီမိုဗဈ Ibrahimović ရဲ့ မနျယူကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှုမြား